Umaki: Ubuchwepheshe | Martech Zone
Umbuzo wokuthi kwakhiwe noma kuthengwa isoftware kuyimpikiswano ende eqhubekayo phakathi kochwepheshe abanemibono ehlukahlukene kwi-inthanethi. Inketho yokwakha isoftware yakho yangaphakathi noma ukuthenga isisombululo esenziwe ngomumo emakethe igcina iningi labenzi bezinqumo lididekile. Njengoba imakethe ye-SaaS ikhuphukela enkazimulweni yayo egcwele lapho usayizi wemakethe kulindeleke ukuthi ufinyelele kuma-USD 307.3 billion ngo-2026, kwenza kube lula ukuthi imikhiqizo ibhalisele izinsizakalo ngaphandle kwesidingo
Amasu aphezulu we-3 Tech for Publishers ngo-2021
NgoLwesibili, ngo-Mashi 30, i-2021 NgoMsombuluko, Mashi 29, 2021 UJeff Kupietzky
Unyaka odlule ube nzima kubamemezeli. Njengoba kunikezwe isiphithiphithi se-COVID-19, ukhetho, kanye nezinxushunxushu zenhlalo, abantu abaningi basebenzise izindaba eziningi nokuzijabulisa ngonyaka owedlule kunanini ngaphambili. Kepha ukungabaza kwabo imithombo enikeza lolo lwazi nakho kufinyelele ezingeni eliphezulu kakhulu, njengoba igagasi elikhulayo lokwaziswa okungelona iqiniso lidudula ukwethembela ezinkundleni zokuxhumana futhi nasezinjini zokusesha ukuqopha phansi. Inkinga inabashicileli kuzo zonke izinhlobo zokuqukethwe kunzima